महरा अरु अ’भियु’क्त सँगै थु’नुवा कक्षमा ! – Life Nepali
महरा अरु अ’भियु’क्त सँगै थु’नुवा कक्षमा !
काठमाडौं। दशैंको मुखमा ब’लात्कार आ’रोपमा प’क्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्र’हरी हि’रासतमै तीन रात बि ताएका छन् । उनलाई अरु अ’भियु’क्त ज’स्तै पु’रुष थु’नुवा क’क्षमा रा’खिएको छ । प्रहरीका अ नुसार सिंहदरबास्थित प्रहरी वृत्तमा दुईवटा थु;नुवा क;क्ष छन् । एउटा महिला र अर्को पु’रुष थु’नुवा कक्ष । महरा उच्च र’क्तचा’पका बि’रामी भएकाले उनलाई राखिएको कोठामै अ’क्सिजन राखिएको छ । महरालाई प्र’हरी अ’स्पतालकै चिकित्सकको टोलीले थु’नुवा क’क्षमै आएर चेक जाँच गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । थु’नुवा कक्षमा रहेका महरालाई भेट्नका लागि परिवारका सदस्य बाहेक अरु कोही पनि पुगेका छैनन् ।
प्रहरीले समेत परिवार बाहेक अन्यलाई भेट्न दिएको छैन । महरालाई सिंहदरबार वृत्तको एक छु’ट्टै कोठामा राखिएको छ । यसपालीको दशैँको टीका समेत नलगाएका महरालाई प्रहरी अधिकृतको मेसअनुसारको खानेकुराको व्यवस्था गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर महराका परिवारले समेत बेलाबेलामा खानेकुरा ल्याइदिने गरेका छन् । थु’नुवा क’क्षमा महराले बेलाबेलामा पुस्तकहरु समेत पढिरहेको देखिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । देशभर दशैँको रमझम चलिरहेका बेला गत आइतबार महाअष्टमीका दिन बेलुका प्रहरीले म’हरालाई प’क्राउ गरेको थियो। संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीमा’ यौ’न दु’व्र्यव’हा’रको आ’रोप ला गेपछि म’हराले सभामुखबाट रा’जीनामा दिएपनि सरकारी निवास छा’डेका थिएनन् ।
दुई दिनअघि महरा वि’रुद्ध जा’हेरी परेपनि प्रहरीले उनलाई दुईदिनपछि मात्रै प’क्राउ परेका हुन् । तर महाअष्टमीको विदाका दिन समेत काठमाडौँ जिल्ला अ’दालतका न्या’याधीशको प’क्राउ गर्ने अनुमतिपछि म’हरालाई प’क्राउ गर्न ठुलो सं ख्यामा प्र हरी प रिचालन गरी प’क्राउ गरिएको थियो । उनलाई प’क्राउ गर्न पुगेको प्रहरी उनलाई आफ्नै गा डीमा जाने उनको इ’च्छा पुरा गर्न तयार देखियो, र महरा आफ्नै नीजि गा डी चढेर सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगे । जहाँ उनी तीन दिनदेखि प्रहरीको थु’नुवा क’क्षमा छन् । देशभरीका सबै अ’दालतहरु दशैँ वि’दाका का’रण ब’न्द रहेका का’रण उनलाई २८ गतेमात्रै अ’दालतमा पेश गरिनेछ ।-
थप समाचार – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार नेपाल आउने
काठमाण्डौ – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आउँदाे शनिबार नेपाल आउनुहुने भएको छ ।राष्ट्रपति सी को राजकीय भ्रमण अक्टोबर १२ र १३ अर्थात आउने शनिबार र आइतबारका लागि तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लाग्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।राष्ट्रपति सी को भ्रमण आउने शनिबार र आइतबार नै हुने भनिए पनि तालिका हेरफेर हुनसक्ने भन्दै सरकारले आधिकारिक रुपमा केही बताएको थिएन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुहुनेछ ।भ्र’मणका क्रममा केही दुईपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी शुक्रबार अक्टाेबर ११ मा भारत भ्रम’णमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत भ्रमण सकेर चीन फर्कने क्रममा उहाँ शनिबार काठमाण्डौ ओर्लने र आइतबार चीन जाने तय भएको हो ।उहाँको स्वागतका लागि काठमाण्डौमा तयारी तीव्र पारिएको छ । सु’रक्षा व्यवस्थादेखि सडक सफा गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, पार्क बनाउने लगायतका काम धमाधम भइरहेका छन् । यससँगै सी २३ वर्ष यता नेपाल भ्र’मण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति बन्नुहुनेछ ।
Previous दशै पनि नभनी गौतमबुद्ध विमानस्थलको निरीक्षणमा निस्के मन्त्री भट्टराई !
Next अब प्रचण्डलाई सजिलै प’क्रा’उ गर्न सकिने, अदालतले गर्यो यस्तो ग’म्भीर फै’सला !